Global Voices teny Malagasy » Madagasikara: Kianin’Ireo Mpitoraka Bilaogy Malagasy Any Frantsa Ilay Politikan’i Sarkozy Momba Ny Fifindràmonina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Jolay 2018 7:57 GMT 1	 · Mpanoratra Lova Rakotomalala Nandika (fr) i Claire Ulrich, Lauren RAJAOBELINA
Sokajy: Frantsa, Madagasikara, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fifidianana, Fifindràmonina, Mediam-bahoaka, Politika
Ny famoronana minisitera iray misahana ny fifindràmonina sy ny maha-olom-pirenena no fandaharanasa iray izay heverin'ny filoha frantsay vaovao, Nicolas Sarkozy. Tsy maintsy manaiky io fomba fiasa hentitra io, ary manaporofo ny fifatorany amin'i Frantsa ireo mpifindramonina izay miaina ao Frantsa efa an-taonany maro, mba hahazoany ny fahazoandàlana hijanona ho olom-pirenena frantsay. Nampiady hevitra ireo mpitoraka bilaogy malagasy monina any Frantsa ireo lalàna vaovao vaovao ireo, miaraka amin'ny fahadisoam-panantenana sy esoeso madinika. Namoaka lahatsoratra iray manazava ny fandikany ireo fepetra vaovao ireo  i Tattum. Ao amin'ny sehatra fanehoankevitra, nahazoana valiny sy fomba fijery avy amin'ny mpitoraka bilaogy hafa ilay lahatsorany.
Mpangataka ho an'ny fifindràmonina voafidy ?
Vitako ny fianarana izay nataoko, vanim-potoana tsy manam-paharoa tamin'ny fiainako izay nandraisako ny tombony tamin'ny fanampian'ny frantsay, ho amin'ny trano fonenana. Hmm … Tahaka ny ankamaroan'ny mpianatra, hoy ny fiheverako. Tsy menatra tamin'ny fidirako amin'ny tontolon'ny asa frantsay aho, tsaratsara kokoa aza ny nataoko noho ny an'ireo frantsay namana, tena frantsay ray sy reny, mpiara-nianatra tamiko, raha tsy maintsy milaza izany fampitahana izany aho. Nanangana tambajotra matihanina tany amin'ny ilany Atsimo-Andrefan'i Frantsa aho, nihaona tamin'ireo olona mendrika izay mitsara ny fahaizana sy ny fahaizamanao anananao, ary nahazo fifanarahana CDI telo ao anatin'ny efatra taona …
Fa raha tsy maintsy ilaina ny mameno taratasim-pangatahana mba hanamarinana izany, tsy hiasa amin'ny karama kely aho, tsy hanadàla tena, na handreraka ny tenako, tsy hisahirana, tsy hiforitra ho 4 na 2. Tsy misy ny ankoatry ny fireharehana. Satria, rehefa miova làlana sy toerana ny rivotra, tsy manohitra azy mihitsy aho.
Soratan'i Lutinewink ao anatin'ireo fanehoankevitra fa mahatsapa ho voahilik'ilay lalàna vaovao izy
Eny, azo lazaina fa tsapako hoe izaho no tena kendren'io mety ho ministeran'ny fifindràmonina sy ny maha-olom-pirenena ho avy io… Ny fanarabiana dia vao voaangoko daholo ireo taratasy rehetra ilaina amin'ny fangatahana ho olom-pirenena. Manodidina ahy, betsaka ny olona, indrindra fa ny ‘mpiara-miasa” no gaga mahafantatra fa tsy mizaka ny zom-pirenena frantsay aho, satria noheverin-dry zareo fa ” efa tena tafiditra” aho, tsy isalasalàna.
Vola sista dia milaza fa mahatakatra ny politikan'ny filoha vaovao :
Fa amin'izao fotoana izao, raha eritreretina tsara, any Mada, raha mba izaho no filoha, dia hampihariko ( na saika) ireo lalàna mitovy amin'izay nosainina taty amin'ny “metropole” momba ny fifindràmonina ! ” Mialà izay tsy tia an'i Mada”
Avoitran'i Nivo ny olana fonosin'io lalàna vaovao io. Heveriny fa manambany ny olana amin'ny lafiny maha-olona izy io ary mijery tavan'olona ilay fepetra ho amin'ny fandraisana ho olom-pirenena.
Mikasika ny fifindràmonina voafidy, dia mazava fa tsy ankasitrahako ny sosokeviny, tsy amin'ny maha-vahiny monina aty Frantsa, fa amin'ny maha-olona manaja ny fahambonian'ny olona sy ny fahalalahana ary ny safidy mikasika ny làlana izay tian'ny tsirairay itondrana ny tenany.
Ary koa, ahoana no fomba hanombànana ny “kalitao”, ny “fitiavana” ny ” fanolorantenan'ny” olona iray ho an'ny firenena vahiny ? tsy mino aho fa misy ny fepetra tsy miangatra ahafahantsika maka toerana mpitsara … mampalahelo. Mety handamina zavatra betsaka izany …
Marihin'i Rotsaka ny fitoviana misy eo amin'ny fanapahankevitra miha-jadona hatrany raisin'i Frantsa sy any Madagasikara.
Sylvain Urfer [pretra katolika frantsay, izay nanokan-tena ho an'ny asa fanasoavana any Madagasikara nandritra ny am-polo taona] dia noroahana, tsy amin'ny antony, tahaka izany, araka ny sitrapon'ny Fanjakana Malagasy, fiainana 30 taona voafafa tsy nisy fanazavana, fanabantiana tsy misy tahaka izany. Tsy vao voalohany izany, fa taorian'i Peguy avy amin'ny RFI sy ireo zatovolahin'ny ” Nouvelles de Mada” saingy famantarana fotsiny izany. Nanao zavatra be dia be ho an'Anosibe izy, olona tsy iriana hipetraka eto izy izao.
Satria tsy tiako raha aty Frantsa no handraisan'ny fanjakan'i Baroa ny fitondrana, aleoko Sego, tsy misy fiantrana … Satria tsy zakako ny fiheverana fa ireo malagasy monina aty Frantsa dia hahatsapa koa hoe ambaniana na ahilika.
Manala azy kely i Sipakv, amin'ny fijerena ny politikan'izy ireo tsirairay, hoe ny filohan'i Etazonia no voalohany niarahaba ny filoha frantsay vaovao. 
Tsy hoe misalasala amin'ny endrika – sy ireo fahazarana, ny ‘sic’ !- n'ny filoha aho fa mampiaina ny fanantenana sady manao izay hanarahako ny fizotr'ilay famaranana goavana, mifatotra eto amoron'ny reniranon'i Potomoc. Fa, angamba, ilay maherifonay aty an-toerana no voalohany nandray ny ‘bigophone’ mba hiarahaba azy. Mampalahelo, fa tsy mifanaraka ny fotoanan-dry zareo, tokony hifampisakambina ry zareo amin'ny fiheverana ireo andian-tafika any Iràka.
Mamoaka lahatsoratra  vazivazy  amin'ny teny malagasy momba ny governemanta frantsay tena matanjaka sy momba an'i Sarkozy, izay antsoiny hoe “petit corps malade »  (vatana kely marary)  i Harinjaka.
bedy izay tsy mitovy hevitra amin’i “petit corps malade”, bedy raha mandeha mafy amin’ny fiara na tsy mamatotra fehikibo, bedy ny tena raha teratany vahiny ka mba te-hitady ravinahitra aty amin’i la frantsa reny malala
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/07/30/121982/
 lahatsoratra iray manazava ny fandikany ireo fepetra vaovao ireo: http://tattum.canalblog.com/archives/2007/05/06/4863751.html
 ny filohan'i Etazonia no voalohany niarahaba ny filoha frantsay vaovao.: http://www.haisoratra.org/gasycool/?p=284